मुख्यमन्त्री शेरधनसंग विवाह भएपछि पहिलो पटक चामलको बोरा बोक्दै देखिइन् जाङ्मु इन, गरिन् यस्तो गुनासो (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Kura
घनघोर कलियुग? भान्जा भान्जीलाई गरिदिए सन्सारबाटै बिदा, दाजुले बहिनीलाई समेत छोडेनन्
भोलि देखी फेरी कडा लकडाउन सुरु हुँदै ! बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म पसल खोल्न पाईने
महिनावारीको समयमा यौन सम्बन्ध राख्न हुन्छ वा हुदैन ?
प्रियंकाले तीन जनासँग बिहे गरिन्, पहिलोबाट १ करोड लिइन्, दोश्रोबाट ४५ लाख अनि तेश्रोसँग अमेरिका लागिन्
मृ’त श्रीमतीको लाशसँग ६ रात ! यति सम्म शोच्न नसकिने काम गरे!
विवाह पछि किन मोटाउछन् महिला ? अर्थोक नसोच्नुहोस् कारण यस्ता छन्
भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी ७ कुरा ?
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/मुख्यमन्त्री शेरधनसंग विवाह भएपछि पहिलो पटक चामलको बोरा बोक्दै देखिइन् जाङ्मु इन, गरिन् यस्तो गुनासो (भिडियो हेर्नुस्)
मुख्यमन्त्री शेरधनसंग विवाह भएपछि पहिलो पटक चामलको बोरा बोक्दै देखिइन् जाङ्मु इन, गरिन् यस्तो गुनासो (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाहको चर्चा अझै सेलाएको छैन । उनले जाङ्मु इन संग केही दिन अघि विवाह गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राई र जाङ्मु बीचको उमेरको फरक र विवाहको शैलीलाई लिएर निकै चर्चा भएको थियो । साथै शेरधनलाई केही वर्ष देखि श्रीमान दावी गर्दै आएकी बालिका खड्काले दिएको अभिब्यक्तिका कारण पनि उनको विवाह चर्चामा आयो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईसंग विवाह गरेपछि जाङ्मु इन पहिलो पटक सार्वजनिक भएकी छन् । उनी एक पवित्र सेवा नेपालमा रहेका बालबालिकाहरुसंग जन्मदिन मनाएकी छन् । उनले संधैका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि यि बालबालिकाहरुसंग जन्मदिन मनाएकी हुन् । मिस मंगोल (२०१८) बनेपछि उनी आफु समाजसेवामा लागेको बताएकी छन् । त्यही बेला देखि नै यसरी जन्मदिन मनाउँदै आएको उनको भनाई छ ।
उनले अन्य धेरै सामाजिक कामहरु पनि गर्दै आएको बताएकी छन् । उनले समाजसेवाकै लागि एक संस्था पनि स्थापना गरेको बताएकी छन् । आफुलाई मुख्यमन्त्रीको श्रीमती भएकाले देखाउनका लागि सामाजिक सेवामा आएको हो भन्ने गलत धारणा नराखीदिन उनले आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, मुख्यमन्त्रीको श्रीमती भएको भर्खरै हो, तर म मिस मंगोल भए देखि नै समाजसेवामा लागेकी छु ।
उनले आगामी दिनमा सामाजिक कामलाई जारी राख्ने बताएकी छन् । उनले आफ्नो कामको दायरा अझ बढाएर लैजाने पनि बताएकी छन् । जन्मदिन मनाउन आएकी जाङ्मु इनले तपाईको कति औं जन्मदिन हो भनेर प्रश्न गर्दा पनि आफ्नो उमेर बताइनन् । उनले भनिन्, उमेर जस्ट नम्बर हो त्यसैले नखुलाउँ ।
गर्भवति प्रियंका र ऋचा एकअर्कोको भुडि छाम्दै भिडियोमा (हेरौँ भिडियो)
यस्ता थिए रमेश प्रसाईं जब बिजय कुमारले पहिलोपटक भेटेका थियो (भिडियो हेर्नुस्)
शिशिर भण्डारीलाई एक्कासी के भयो ? उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले यस्तो छ, भावुक हुँदै श्रीमती रोईन् (भिडियो हेर्नुस)
पितृ शोक परेर भाव्विहल अधिकारीलाई नीताले यसरी सम्हालिन, छोडिन्न एक छिन पनि उनको हात, हेर्नुहोस देखियो यस्तो कारुणिक दृश्य (भिडियो सहति)